नेप्सेमा ३ कम्पनीको सेयर सूचिकृत, हेर्नुस् कुनको कति कित्ता ? - Laganikhabar
विहीबार, १४ साउन २०७८| Thursday, July 29, 2021
शनिबार, १५ जेठ २०७८, ०९ : २५ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडौं - नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा यस साता विभिन्न ३ वटा कम्पनीकाे सेयर सूचीकृत भएकाे छ । स्टकका अनुसार एउटा कम्पनीकाे बाेनस सेयर, एउटा म्युचुअल फण्ड र एउटा बैंककाे ऋणपत्र यस साता नेप्सेमा सूचिकृत भएको हाे ।
शिखर इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेडकाे २७.७६९ प्रतिशत बाेनस बापतकाे ३८ लाख ४० हजार २ सय २ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको हाे ।कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ काे मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई २७.७६९ प्रतिशत बाेनस र १.४६२ प्रतिशत नगद गरि कूल २९.२३१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकाे थियाे ।
यसैगरी, सनराइज ब्लूचिप फण्डकाे १२ करोड ५० लाख कित्ता इकाई नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । फण्डको दोस्रो बजार कारोबारको लागि SBCF सिम्बोल प्रदान गरिएको छ । सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले चैत्र १ गते, आइतबारदेखि चैत्र ८ गते, आइतबारसम्म सनराइज ब्लूचिप फण्ड नामक सामुहिक लगानी कोष बिक्री खुल्ला गरेको थियाे । क्यापिटलले सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरि प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेकाे थियाे । जसमध्ये कोष प्रवर्धक सनराइज बैंकलाई १५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ५० लाख इकाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई छुट्याइएकाे थियाे ।
त्यसैगरी, एनसीसी बैंक लिमिटेडको "९.५% एनसीसी ऋणपत्र २०८६" काे ३० लाख कित्ता ऋणपत्र सूचिकरण गरिएको हो । बैंकले गत चैत १३ गते, शुक्रबारबाट चैत्र १८ गते, बुधबारसम्म १० वर्ष अवधिकाे लागि “९.५० प्रतिशत एनसीसी ऋणपत्र २०८६” नाममा ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गरेको थियो । बैंककाे उक्त ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले गरेकाे थियो ।
बुधबार यी कम्पनीका लगानीकर्ता मालामाल
यी हुन् आज सर्वाधिक गुमाउने १० कम्पनी
सेयर बजारको उकालो यात्रा कायमै, ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ नेप्सेमा सूचिकृत, ओपनिङ रेन्ज कति ?
मल्टीपपर्स फाइनान्सको सेयर मूल्यमा सर्किट, नेप्से ३१ सयको बिन्दुमाथि
अपी पावरको २ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर लिलामीमा, मूल्य कति ?
प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले सानी हेभी इकुप्मेन्ट किन्न कर्जा प्रवाह गर्ने
दिनहुँ बढ्दै कोरोना संक्रमणदर, सतर्क रहन विज्ञहरुको आग्रह
खर्च गर्न नसक्दा स्थानीय तहको एक अर्ब बजेट फ्रिज
सुनको मूल्यमा गिरावट, कति पुग्यो तोलाको ?
नेप्सेमा थपियाे ३ लाख ९० हजार कित्ता बोनस
आज यी १० कम्पनीका लगानीकर्ता मख्खै
यी १० बैंकबाट नि:शुल्क आईपीओ भर्न सकिने, अन्य बैंकले कति लिन्छन् सी-आस्वा शुल्क ?
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड कहिले ?
मिर्मिरे लघुवित्तको एफपीओले कति पायो रेटिङ ?
युनियन लाइफको आईपीओले ओपनिङ्ग रेञ्ज कति पाउला ?
टेलिकमका ग्राहकलाई सेयर दिन आवश्यक गृहकार्य शुरू, क-कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आईपीओ प्रि-अलटमेन्ट सम्पन्न, बाँडफाँड कहिले ?
युनियन हाइड्रोपावरको साधारण सभाबाट हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित
मेरो सेयरमा थपियाे 'माई होल्डिङस्' नामक नयाँ फिचर